Informal – Maskandi Media
Kuhle ukuzivocavoca by Mthandeni
Usekhethe ukujoyina labo abajimayo umfoka Manqele. Uthi ayikho into ebaluleke njekuzivocavoca uma ungumuntu, ikakhulu uma ungumculi ngoba kuyasetshenzwa. Uthi inhloso enkulu yokuthatha lesi sinqumo engasho ukuthi wenzela ukuthi uma ziqahthiwe afike ekulungele nangomoya ukugijima laphana phambi kwezihlwele ngoba zisuke zikhokhile zizobuka ukuthi ugijima kanjani.
“Lesi isinqumo esihle kabi engisithathile ngoba sinemphumela emihle kuphela. Umzimba ojimayo awungenwa kalula imkhuhlane kanti kuyasiza nasekuthenini ukwazi ukugida isikhathi eside. Kungaba kuhle kakhulu uma kule ndima yethu”
“singazijwayeza ukujima ngoba singabaculi bakashameni. Ushamenike udinga sengathi ungaba nomoya uma uzogida ngoba kugcina sekuhefuzeleka phambi kwabantu ungasakwazi nokukhuluma kanti bayafisa kakhulu ukuzwa uvo lomculi uma ebadlalela”.
“Kuyangithokozisa ukubona umzimba wami uyivuma lento engifuna uyenze. Akukabi isikhathi eside ngiqalile kodwa umehluko usukhona okusho ukuthi lento idinga ukuzinikela kuphela”.
“Iyashisake nengoma koMacekeceke, ngifisa sengathi abathandi bomculo bengajima bejime bese bengena ezitolo zomculo bazitholele leli cwecwe elihleli phezulu njengamanje ezingomeni ezidla ubhedu”.
“Ngiyathandake ngoba mina ngiyisilomo ebantwini, into uma ngike ngayenza ingena igxile nasezinhliziyweni zabo. Ngithi ababukele nakhuke okuhle kakhulu bakwenze nabo ngoba akukhethi bala lamuntu”.
“Ukujima kusiza wonke umuntu nabo abathandi bomculo kungakuhle uma bengazisondelanisa nezindawo la kujinywa khona ukuze imzimba yabo ihlale iphephile”. Kusho Igcokama.
Bekufinywa ngendololwane kwaMpungose
Kahle kahle bekufinywa ngedolo, indololwane ivele yabancane kakhulu akwaze kwafinyeka ngayo. Inyama bekuyidulu zabasali, iziphuzo kuyinto esiyoze ilahlwe. Angisayiphathi eyephalishi nezoso zakhona. Umfoka Mpungose uthathe isinqumo sokuvakashela ekhaya la akakhulela khona kuyodliwa nje inyama.
Kubikwa ukuthi kuhambe kahle konke ngendlela abekade efise ngakhona.
“Ngibonga kubo bonke abebekhona ngenkathi sisika iqatha ekhaya la engakhulela khona. Bekumnandi kudelile zidla izinsizwa nezintombi nabo bonke ebebekhona. Bathokozile bonke abantu bathi Khuba siyabonga”.
“Ngisemalungiselweni okukhipha isihloko se-album yami entsha elindelwe izwe lonke ngoba kuyaziwa ukuthi mhla kuphuma yona kokonakala kakhulu. Ngize ngelinye igiya kulo nyaka ngoba ngizoyidedela ngo-November”.
“Kothi bekhipha bobe bezama ukugqiba umgodi omkhulu kakhulu okungasoze kwaba lula neze ukuthi bewugqibe. Le album yakulonyaka ngiyayesaba kwamina ngoba kuningi engikubonile kulesisi khashana ngisamile ukukhipha ngenxa yokuba matasa ngezinto eziningi ebengizilungisa”.
“Ngathembisa abathandi bomculo wami ukuthi angizukukhipha ngoGood friday ngoba ngangimatasa ngilungiselela umcimbi omkhulu ongakagqitshwa lutho nanamhlanje”.
“Kunjalo ke njengob ngathi ngizokhipha ukuphela konyaka nje, sekunjalo ke akusajiki akusena turning point. Ngifuna beze bevume ukuthi ngiyinkosi yabo, nongayidli inja uyolala eyidlile mhla kuphuma le album”. Kusho uKhuzani.
Ubafuna beyimbumba uKhuzani
Usethathe isinqumo sokuvele ewuyeke lo mncintiswano wasesangweni umfoka Mpungose. Ekhuluma nabathandi bomculo wakhe ubabuzile ukuthi bakubona kunjani ukuthi abacele manje ozakwabo behlangane babe imbumba. Lokhu ukusho ngoba uyabona ukuthi akasayitholi ndawo ichallenge.
“Ngiwudlal ngedwa manje lo mdlalo. Sikuphi isidingo
“sokulokhu ushayana nabantu njalo nje engathi balele phansi? Abavele behalngane manje bebe imbumba ngoba isono phela manje lesi. Sicabanga nokuthi sibayeke ke beshayane bodwa singawungeleli lo mncintiswano wokubalwa esangweni”.
“Sekuyazwela phela manje. Ngizozwa umbono wama-Blue Nation ukuthi wona abona kanjani ngoba cha mina sengithanda ukuyehla lenqola ngoba njalo nje sivele siqhamuke nento entsha bese sibashaya”.
“Okufike kungihlekise tu ukuthi njalo nje uma ngibashayile bavele bethi ngithwele. Yazi umuntu avele akhombise nje ukuthi useyakwesaba kodwa engafuni ukulimisa ngesihloko”.
“Uma ama-Blue Nation ethi asiqhubeke sibambise elenjelane kulungile phela imlando vele sisazimisele ngokuyiqopha. Nginawo kodwa wona umuzwa wokubaxolela kodwa ngokomlando cha ngifuna beze bethi tswi sesivuthiwe”. Kusho uKhuzani.